Ajabi Radha Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Ajabi Radha
~अजबी राधा~ “बैनी कहाँसम्म पुग्ने हो ?” संगै सिटमा बसेका अपरिचितले प्रश्न तेर्साए। तुल्सीपुरसम्म, तपाईँ नि ? मैले फर्काएको जवाफ। आलोकसँग चिनाजानीको पहिलो परिचय थियो यो। आलोक, डिप्लोमासम्मको अध्ययन गरेको एक मध्यमवर्गीय युवा, जागिरको खोजीमा दाङ जाँदै रहेछ। सामान्य भए … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : नेपाली कथा	| Ajabi Radha	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
कथा : मैले माया नगर्ने ऊ
~अजबी राधा~ वास्तवमा मैले चिनेकै छैन ऊ को हो भनेर। नाम, थर, ठेगाना, केही थाहा छैन। ऊ जो भए पनि मलाई के सरोकार। मलाई त निदाउने बेलामा उसको बोली चाहिन्छ। उसको सुमधुर हाँसो चाहिन्छ, जसले मलाई आनन्द दिन सहयोग गर्छ। … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : के गल्ती भएकै हो त?
~अजबी राधा~ रातको १२ बज्यो, छिप्पिदो रात निकै पट्यारलाग्दो छ। बर्खायामको समय पानी परिरहेको छ। कता कता कुकुर भुकेको आवाजले पनि कोठा त्रासदियुक्त बनाइदिएको छ। आँखामा निद्राको लेस पटक्कै छैन, कता कता अकल्पनीय दुर्घटनाको भयले अठ्याएको छ मलाई। भोलि बिहानसम्म … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →